Sugar Daddies dị njọ maka ikike ịma ihe na ị nweta ego, achọpụtara ihe ọmụmụ ọhụrụ - Ụwa 2022
Sugar Daddies dị njọ maka ikike ịma ihe na ị nweta ego, achọpụtara ihe ọmụmụ ọhụrụ
Nkasi obi amara nke inwe okenye nwoke ma ọ bụ nwanyị bara ọgaranya nwere ike iduhie.
Nnyocha ọhụrụ gosiri na ndị nwere di ma ọ bụ nwunye tọrọ ma ọ bụ ndị tọrọ na-enwekarị obere ego, agụmakwụkwọ na-erughị ala, ikike nghọta dị ala, na ndị na-adịghị mma karịa ndị nwere di na nwunye bụ ndị agadi.
Nnyocha ahụ, nke e bipụtara na Review of Economics and Statistics nke ndị nyocha na Mahadum Colorado dị na Denver na Boulder kọwakwara na ndị nwere agụmakwụkwọ ka ukwuu na ọrụ elu-igwe na-achọkarị iso ndị ọgbọ ha na-akpakọrịta ma lụọ ọtụtụ ndị ọgbọ ha.
Ndị nchọpụta ahụ jiri data ọnụ ọgụgụ US sitere na 1960 ruo 2000 iji chọpụta agụmakwụkwọ na ego, 1979 National Longitudinal Survey of Youth iji chọpụta ikike nghọta, na National Longitudinal Survey of Adolescent Health iji tụọ mma, akwụkwọ akụkọ UC Denver na-ekwu.
Ha enyeghị ogo afọ maka mmalite nke mmetụta ndị a, mana ha chọpụtara na ihe ngosi na-adịghị mma na-eto eto ka ọdịiche afọ na-abawanye.
"Ọ dabere n'ezie na onye netwọk mmekọrịta gị bụ," onye na-ede akwụkwọ bụ Hani Mansour kwuru na nkwupụta mgbasa ozi. "Ndị nwere ikike ịkpata obere ego nọ na netwọkụ ndị nwere afọ dị iche iche."
Ndị nchọpụta ahụ chọpụtakwara na ihe a na-akpọ "cougar" abụghị ihe ọhụrụ, ọ dịkwa kemgbe 1960. N'aka nke ọzọ, ha chọpụtakwara na ndị ọgbọ ha na-alụrụ onwe ha na-abawanye ụba, akwụkwọ akụkọ ahụ gbakwụnyere.